Message from Chairperson – Nepal Multipurpose Co-operative Society Ltd.
Home » Introduction » Message from Chairperson
अध्यक्षको कलमबाट (Message from Chairperson)
Mr. Ram Chandra Uprety
नेपाल बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेड (NMC-COOP) को स्थापना वि.सं. २०५० साल फागुन २४ गते तद्नुसार सन् १९९४ मार्च ८ तारिखमा भएको हो । संस्था स्थापना गर्दाको मुख्य उद्देश्य समाजमा छरिएर रहेको ससाना रकमलाई सङ्कलन गरी सुरक्षित गर्नु थियो । मैले थाहा पाएसम्म त्यो बेलामा नेपालमा बचत गर्न चाहने व्यक्तिका घरदैलोमै पुगेर सानोतिनो रकम बचत गर्न सिकाउने र बचत गरिदिने कुनै निकाय थिएनन् । त्यसैले सीमा क्षेत्रमा भारतीय कम्पनीले पैसा उठाउने र लैजाने गरेका थिए । तर यसरी विदेशिएको रकम सुरक्षित नहुँदा बचत गर्नेहरु पीडित बन्ने गरेका थिए ।
सहकारीको ज्ञान नभई सहकारी दर्ता गरेर सञ्चालन गर्न पुगियो । ज्ञान थिएन तर भावना पवित्र थियो । त्यसैले होला हामीले सहकारी सिक्न र प्रयोग गर्न कन्जुस्यार्इँ गरेनौँ । सहकारीका मूल्य, मान्यता, सिद्धान्त र मर्मलाई सकेसम्म व्यवहारमा प्रयोग गर्दै जाँदा नै आजको NMC-COOP बन्न पुगेको हो । हामी मात्रै होइन आज नेपालका धेरै सहकारी अभियानमा लागेका सहकारीका शुभचिन्तक र अभियान्ताहरु हाम्रो संस्थाप्रति गर्व गर्छन् भन्ने जानकारी पाउँदा हामीलाई अत्यन्तै खुसी लाग्ने गर्छ । झापावासीले त यो संस्थालाई औधी माया गर्ने र यसको श्रीवृद्धिमा निरन्तर योगदान गरिरहेका छन् ।
आज NMC-COOP कति सबल र सक्षम छ भन्दा पनि यसले समाजमा कस्तो प्रभाव पारिरहेको छ भन्ने कुरा महत्त्वको भएको छ । अब एनएमसी सक्षम छ कि छैन भन्ने विषय गौण बन्ने गरेको छ । किनकि यसको मजबुती, सक्षमता, सुशासन, विश्वसनीयता र दिगोपनामा सदस्य एवम् समुदायले प्रश्न उठाउन छाडेका छन् । त्यो संस्थाप्रति बढेको जनविश्वासको प्रतीक हो भन्ने मेरो बुझाई रहेको छ । अब एनएमसीले यसका सदस्य र समाजमा कस्तो प्रभाव पार्न सकेको छ अर्थात् समाज परिवर्तनमा यो सहकारीले के कति योगदान गर्न सक्यो ? के गर्दैछ र भविष्यमा के गर्न सक्छ ? भन्ने विषय महत्त्वको बनेको छ । त्यसैले यो संस्थाका कार्यक्रमहरु सदस्यको जीवनस्तर कसरी सहज र समृद्ध गर्न सकिन्छ ? समाजमा कसरी सकारात्मक प्रभाव पार्न सकिन्छ ? भन्नेमा केन्द्रित छन् ।
यो संस्थाले नेपाल राष्ट्र बैङ्कको स्वीकृतिमा सिमित बैङ्किड. कारोबार गरिरहेको छ । यसका अतिरिक्त २०७२ सालबाट एनएमसी डेरी व्यवसाय सुरु गरेको छ । प्रतिघण्टा ३ हजार लिटर प्रशोधन गर्ने क्षमताको यो डेरीले स्थापनाको दुई वर्षमै राम्रो फड्को मार्न सकेको छ । यसले संस्थाको विश्वसनीयता र जोखिम लिने क्षमता अझै बढाएको छ । डेरी व्यवसायको माध्यमबाट पशुपालक किसानसँग पुगेर उनीहरुको क्षमता विकास र आयस्रोतमा वृद्धिका कार्यक्रम सञ्चालन गरिदैछ ।
आगामी दिनमा संस्थाले सदस्य र समुदायको विकास एवम् जीवनस्तरमा उल्लेख्य सुधार ल्याउने कार्यक्रम ल्याउनु पर्छ र त्यसको केही खाकाहरु तयार भइसकेका पनि छन् । मलाई विश्वास छ एनएमसीको अनुभवी र समर्पित टिमले संस्थाले अगाडि ल्याएका सबै योजनालाई विगतमा जस्तै भविष्यमा पनि सफल बनाउँदै लैजानेछ । हामीलाई माया र सहयोग गर्ने सबैलाई हार्दिक आभारसहित धन्यवाद दिन्छु । धन्यवाद ।